Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » USA » Iyo Inoshamisa Texas Synagogue Attack: Mafungiro Ese ndeangu Pachake
Mugovera kwaive kutanga kwekupera kwevhiki kwaMartin Luther King.
Kupera kwevhiki ikoko kunofanira kuva nguva yekufungisisa uye nguva apo nzanga dzakawanda dzemadzinza nezvitendero dzinogara muUnited States dzinotora nguva yekufunga kuti tose tingashanda sei kuti tive nemubatanidzwa wakakwana.
Nehurombo, kupera kwevhiki kwakakanganiswa nemamiriro ekutora nhapwa pa Ungano yeBheti Israel.
Kwechikamu chakanaka chezuro wacho, kusanganisira manheru eMugovera, ruzhinji rwenyika rwakanga rwakanangidzira ngwariro paingava ngwavaira yaizoitika paUngano yeBeth Israel. Nenzira inofadza, hapana nomumwe wevakatapwa akakuvadzwa.
Panguva yekunyora uku, hatina ruzivo rwakakwana. Zvakawanda zvichiri kufungidzira. Mupari wemhosva akataura kubva pakutanga kuti aitarisira kufa. Tarisiro iyoyo yaive fungidziro, chishuwo chekuzviuraya, kana chishuwo chekuva mufiri (kana imwe musanganiswa)?
Zvinangwa zvezviito zvake hazvisati zvanyatsojeka. Izvo zviri pachena ndezvekuti nezuro haana kutevedzera maitiro eAl Qaeda uye zviitiko zvinosuruvarisa nezuro zvakaburitsa mibvunzo yakawanda kupfuura mhinduro. Kunyange hazvo vemutemo vakangoburitsa ruzivo rwakawanda, zviri pachena kuti vemutemo vakaita basa rakanaka.
Mapurisa eMunicipal, state and federal aive nemoyo murefu uye aishandisa nguva sechombo. Mativi ese ekuteererwa kwemutemo akashanda pamwe chete, uye vakurukuri venhapwa vaive vakanaka. Vezvemitemo pamatanho ese vanokodzera kuyemurwa nekutenda takatarisana nedambudziko ringave riri dambudziko.
Rabbi Cytron-Walker akanga awana kudzidziswa kwakakosha kubata nechiitiko chakadaro. Kunyangwe zvinosiririsa kuti mapurisa anofanirwa kudzidzisa vafundisi kubata nemhando dzezviitiko izvi, kudzidziswa kwakashanda uye vezvenhau vanoshuma kuti panguva yese iyi Rabbi Cytron-Walker aive akadzikama uye akadzikama.
Chiitiko ichi, zvisinei, chinomutsa mibvunzo yakawanda uye chinopawo matambudziko matsva. Pakati pemibvunzo inoda kubvunzwa ndeiyi:
Kazhinji, rufu runoitika pakutanga kwechiitiko chegandanga. Kana mupari wemhosva aida kuuraya sei asina kuita izvi pakutanga kwechiitiko?
Zvinangwa zvomuiti wezvakaipa zvaiva zvipi? Pakutanga akakumbira kusunungurwa kwegandanga rine mhosva, Dr. Aafia Siddiqui. Asi aifanira kunge achiziva kuti pakanga pasina mukana wekuti izvi zvaizoitika. Paiva nezvimwe zvikonzero here? Uyu wanga uri muedzo here wekurwisa hugandanga hutsva? Pane dzimwe vavariro dzatisingazivi here?
Nei akasarudza sinagogi? Ichi chaive chimwe chiito chekupokana neSemitism here? Sei akasanangura Bheti Israeri? Masevhisi ayo aive pa-line zvichireva kuti nhamba chaiyo yevaunganidzi vaivapo yaizova shoma. Ukuwo, kwaiva nevanhu vanopfuura 1,000 XNUMX vaipinda minamato yemangwanani eShabbat yepamhepo. Uyezve, mishumo yakaratidza kuti mupari wemhosva aida "kurwisa" sinagogi pedyo neDallas-Ft. Worth airport? Kana zvakadaro, nei izvi zvingave zvakakosha kwaari? Sezvineiwo, muiti wezvakaipa wacho aiita seaifarira rabhi uye akaratidza kuti ainzwa akagamuchirwa paBeth Israel. Magandanga mazhinji haafariri vanhu vaanosangana nawo. Ko iyi mirangariro yakanga iri zviratidzo zvokusagadzikana mundangariro kana kuti rudzi rutsva rwougandanga here? Aya maidi asina kubatana anoreva kuti kurwiswa kwegandanga uku hakuna kutevedzera maitiro enguva dzose. Zvinotove nemubvunzo kana kurwiswa uku kwaingove kupesana nevaSemite, kana mupari wemhosva akasarudza sinagogi kuti riziviswe zvakanyanya. Kurwiswa kweAl Qaeda kunowanzo kutsvaga kushambadzirwa sechishandiso chekunyorera.
Kunyangwe zvave pachena kuti mupari wemhosva aive muBritish isu hatizive kana chidimbu chedata chiri chemhedzisiro. Vamwe vaona kuti US ine muganho wakavhurika wekumaodzanyemba, zvekuti vanhu vanosvika mamirioni maviri vakapinda zvisiri pamutemo kubva muna Ndira 2, 20, uye vanhu ava vanobva kunyika dzinopfuura zana. Ichi chokwadi chekupedzisira chinotungamira kumubvunzo wekuwedzera, ivo vakawana sei kubva kunyika yavo kuenda kumuganhu weUS-Mexican? Ndiani ari kupa mari yekuenda kuMexico kana nyika yeCentral America uye vari kupinda munyika idzi zviri pamutemo kana zvisiri pamutemo?
Pane hukama here pakati penjodzi yekubuda kweUS kubva kuAfghanistan uye zvakaitika nezuro? Iyo US inoita seisina kusimba zvekuti Al Qaeda yakashandisa chiitiko ichi sekuyedza kumhanya?
Pane hukama pakati pechiitiko ichi neUS 'iri kuramba ichipara mhosva mumaguta makuru? Uchiona iyo US kubva kunze kwenyika, iyo US inoita seisina simba zvekuti avo vangatsvaga kukuvadza, kunyanya maIran, asiwo vamwe, vaida kuyera sarudzo yeUS?
Rabi Cytron-Walker munhu ane mukurumbira uye anodiwa muColleyville Jewish uye nharaunda yakakura. Iye ishamwari nemukuru wemapurisa, nedhipatimendi rayo remapurisa, anoshanda mukuita zvekudyidzana, uye anofarirwa kwazvo munharaunda yemuno yechiMuslim.
Nzanga yechiMuslim yomunzvimbomo yakamira nenzanga yechiJudha.
Zvimwe chete zvinogona kutaurwa nezvese nharaunda yeColleyville nenharaunda yayo yechiKristu. Nharaunda idzi dzakabva dzapa rubatsiro nekubatana.
Zvimwe chete zvinogona kutaurwa kune yakakura Dallas-Ft. Yakakodzera nharaunda uye Nyika yeTexas.
Kunyange zvazvo zvisiri pachena kuti kurwiswa uku kwaive kunopesana neSemitic kusvika papi, anti-Semitism idambudziko guru remagariro evanhu munyika yose yeWestern.
Zvimwe zvidzidzo zvepakutanga zvakadzidzwa
Masinagogi emunharaunda (nemamwe masangano echitendero) anofanirwa kuve nehukama hwepedyo nevenzvimbo nevehurumende vemitemo.
Nzvimbo dzenharaunda dzechiJudha, masinagogi uye masangano anofanirwa kuve nehurongwa hwakazara hwekuchengetedza uye kufunga kuti "zvinogona kuitika pano."
Panodiwa dziviriro iri nani mumasinagogi. Uyu mubvunzo wakavhurika wekuti ndiani anofanirwa uye asingafanirwe kuve nepfuti, uye ndeipi mitemo yepfuti inofanirwa kana isingafanirwe kuitwa. Nharo dzinogona kuitwa pamusoro pekuti kune pfuti dzakawandisa muUnited States. Nharo yekupikisa inogona kuitwa yekuti masinagogi/nzvimbo dzenharaunda dzinofanirwa kunge dzakasarudza vanhu vanokwanisa kushandisa pfuti uye vakapfuura nekutarisisa kumashure. Hapana nzvimbo dzepfuti/pfuti dzinogona kuva nengozi kunyanya tichifunga nezvenyaya dzekupokana neSemitism. Magandanga nematsotsi vanofuratira “pasina mitemo yepfuti” uye vanoziva kuti vanhu vari munzvimbo dzisina pfuti havakwanise kuzvidzivirira.
Midziyo yePassive yakadai semakamera inobatsira mukuongorora chiitiko asi haimise kurwiswa kwegandanga.
Vatariri vemasinagogi vanoda kudzidziswa kuti vaone matambudziko angangovapo.
Zvinhu zvakaita semabhegi zvinofanira kusiiwa kure nenzvimbo dzinoungana vanhu.
Zvakakosha kuve nechokwadi chekuti vezvenhau vanoshuma chiitiko nemazvo uye pasina rusaruro. Vazhinji vezvenhau vekuAmerica vakaita basa rakanaka, kune rimwe divi Reuters neBBC vakaita basa rakaderera zvakanyanya.
Afuganisitani BBC Mekisiko Reuters Texas
Kushanya kweMexico iyo SKAL Nzira: Hushamwari, Yakakosha Toast, uye Nyeredzi paAGM
Club Med Inovhura Yayo Yekutanga Spanish Resort MuAnopfuura makumi maviri ...
Metformin Ziso Madonhwe Ekurapa Macular...
Kudzidza Kutsva Kunoratidza Hukama hweMate neAutism
Bournemouth University's new agenda pane Tourism ...
David Feder anoti:
Ndira 17, 2022 pa12: 47
Chimwe chinhu chakakosha cheruzivo chakasiiwa kunze kwechinyorwa ichi. Mutadzi uye "chikonzero" chake (Aafia Sadiqqi) vatevedzeri veCAIR. Vakuru veCAIR vakanyatso, nguva dzose, uye vachiramba vachidana kurwiswa kwemasinagogi muUS. nepo sangano iro richiramba chero hukama nechiitiko ichi, ndinotarisa zviitiko zvekare umo CAIR yaibatanidzwa icharatidza kuti ndiyo chiyero chemaitiro ekuti varambe kubatana kune chiitiko icho chakazoburitswa chokwadi chakavaratidza kubatanidzwa. CAIR ine kwenguva refu yakafumurwa iEid Muslim pamberi pemagandanga uye nyika zhinji, kusanganisira nyika dzeArab, dzakaisa CAIR sesangano remagandanga. Izvi zvinodaro nekuti hukama hweboka iri kumasangano akaita seHamas neHizbollah hwakawandisa, haarambike, uye hahupikisike. Kushingirira kuedza kwemapoka ehurumende yeUS uye vezvenhau kunzvenga chokwadi ichi kunongobatsira kugadzira ivhu rakaorera umo kurwisa kwakadai kunokura.